SEO Buddy: Liistadaada Hubinta SEO iyo Tilmaamaha Lagu Kordhiyo Muuqaalkaaga Darajeynta Noolaha | Martech Zone
SEO Buddy: Liistadaada Hubinta SEO iyo Tilmaamaha Lagu Kordhinayo Muuqaalkaaga Darajeynta Noolaha
Talaado, Maarso 2, 2021 Talaado, Maarso 2, 2021 Douglas Karr
The Liiska Hubinta SEO ee SEO Buddy is khariidadaada wadada ficil kasta oo muhiim ah oo SEO ah waxaad u baahan tahay inaad qaadatid si aad u hagaajiso boggaaga oo aad u hesho taraafikada dabiiciga ah. Kani waa xirmo dhammaystiran, oo aan ka duwanayn wax kasta oo aan ku arkay khadka tooska ah, si aan caadi ahayn u caawiyo celceliska ganacsiga si looga caawiyo inay si joogto ah u hagaajiyaan goobahooda oo ay u kordhiyaan muuqaalkooda raadinta.
Liiska Hubinta SEO-ga waxaa ku jira
Xaashida Hubinta ee 102-Point SEO Xaashida Google
Codsiga Webka Liiska Hubinta 102-Qodob ee SEO
Ebook-ka 62 Bogga (PDF)
Nidaamka jadwalka qorsheynta nuxurka ee 52 usbuuc ah (PDF)
Liiska Hubinta Qaybinta Mawduuca 50-ka (Xaashida Google)
In ka badan 40 nidaam hawleedka caadiga ah (SOPs) si aad u raacdo.
Haddii aad ku cusub tahay SEO oo aad halgameyso, the Liiska Hubinta SEO ayaa kaa caawin doonta inaad fahamto sawirka weyn ee waxa aad u baahan tahay inaad sameyso si aad u hagaajiso oo aad u darajooto bogga. Codsiga iyo xaashiyaha, waxaad awoodi doontaa inaad la socoto waxa aad haysato iyo wixii aadan sameynin si aadan u seegin xeelado muhiim ah.
Si fudud maahan liiska dhibcaha rasaasta, sidoo kale. Liiska hubintu wuxuu la yimaadaa dukumiintiyo faahfaahsan, tallaabo-tallaabo ah si aad u fahamto sida saxda ah ee loo sameeyo tallaabo kasta.
Tani maahan wax iibsi hal mar ah, sidoo kale! SEO si joogto ah ayuu u kobcayaa markaa markaad iibsaneyso Liiska Hubinta SEO, waad heli doontaa helitaanka nolosha oo dhan oo ay kujirto dhammaan wixii cusbooneysiinta mustaqbalka oo bilaash ah.
Haddii aad dhab ka tahay SEO, tani waa kheyraad cabsi badan. Waxa aan ku jeclahay waa hufnaanta aad hesho. Waxay u egtahay isku dayga inaad sameyso xujo jigsaw ah oo aad aragto sawirka markii ugu horeysay. Waad ogtahay waxa loo baahan yahay in la sameeyo.
Louise Green, Macmiil
Meelaha Bartilmaameedka Liistada SEO
Maaddaama makiinadaha raadinta ay isbeddeleen, waxaa jira aagag bartilmaameed oo kala duwan oo ay tahay inaad diiradda saarto haddii aad rajeyneyso inaad si buuxda uga faa'iideysato taraafikada dabiiciga ah ee boggaaga ama dukaankaaga:
Foundation - Sida loo dejiyo falanqaynta, loola socdo ereyadaada muhiimka ah, iyo raadraaca cabbiraadaha Google Search Console.
Khibrada Isticmaalka - Google wuxuu daneeyaa khibrada isticmaale mashiinka raadinta uu leeyahay markay ku soo degaan bartaada, markaa waa inaad sare u qaaddaa khibradaas.
Content - Markaad abuurto waxyaabo aan caadi ahayn, dadku way wadaagi doonaan, boggag tayo leh ayaa ku xirmi doona, Google ayaa kuu qiimeyn doonta.
Performance - Baro sida looga dhigo bartaada mid dhaqso badan si wax walboo dhaqso u rartaan. Google wuxuu jecel yahay degellada deg degga ah.
Bogga SEO-ga - Bog kasta oo ka mid ah boggaagu waa inuu u fududaadaa matoorada raadinta si ay ugu gurguurtaan inay si sax ah u muujiyaan iyo sidoo kale inay adeegsadaan booqdayaashu inay ku dhex wareegaan.
Bogga-ka-baxsan SEO - U samee wacyigelin boggaaga oo ku soo ururi xiriiriyeyaal qiimo sare leh iyada oo loo marayo wacyigelin iyo warbaahinta bulshada si aad u maamusho awooddaada.
Farsamada SEO - Ka fogow dhibaatooyinka guud ee ka hortaga mashiinnada raadinta si ay u ogaadaan uguna muujiyaan bartaada si habboon.
SEO-ga deegaanka - Ku hagaaji liistadaada maxalliga ah ee mashiinnada raadinta iyo sidoo kale tilmaamaha muhiimka ah ee labada matoorrada raadinta ay ku ansaxinayaan macluumaadkaaga iyo halka ay isticmaaleyaashoodu kugu helayaan.
Tani maahan koorso internetka ah! Liiska Hubinta SEO-ga waa khariidad-tilmaameed iyo liistada hubinta guusha SEO oo leh dhammaan waxyaabaha aad u baahan tahay si aad u gaarto natiijooyinka SEO ee sarreeya!
Adeegso nambarka qiimo dhimista MARTECHZONE
Haddii aad rabto 25% qiimaha SEO, waxaad isticmaashaa nambarka MARTECHZONE marka aad wax iibsaneyso! Waxaad sidoo kale heli doontaa xoogaa gunno ah oo ku saabsan ka bixitaanka.
Soo iibso Liiska Hubinta SEO ee SEO Buddy
Shaacinta: Waxaan ku xirnahay SEO Saaxiib.
Tags: sicir-dhimiswaraaqda googlemaxalliga ahseo goobta ka baxsangoobta seodarajaynta raadinta dabiiciga ahisticmaalayaasha mashiinka raadintaraadinta khibrada isticmaaleseo saaxiibliistada hubintaqorshaynta nuxurkatilmaamaha seohagaha hagahaqorsheyntatababarka seofarsamo seo
11 Qalad Oo Aad Ka Fogaato Ololaha Suuqgeynta Emailkaaga
Isbedelka Heerka Beddelidda: Tilmaamaha 9-Tallaabo ah ee Kordhinta Heerarka Beddelka